esikwenzayo - Chengdu Dien Photoelectric Technology Co, Ltd.
Sizibophezele ekwenziweni kwe-serise yezinto ezisekwe kwikristale ngaphezulu kweminyaka eli-12, ngakumbi kwifayilini ye-optics engekho emgceni.
Sineqela eliphambili leenjineli ekusebenzeni kwezinto ezibonakalayo, abanamava atyebileyo ekusikeni nasekupoliseni.
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zokwaleka komntu ngamnye ngokwahluka kwezicelo zabathengi, asiyi kuyeka inyathelo lethu ekuphuculeni umgangatho wokutyabeka ngokunjalo.
Izinto nganye zithathelwa ingqalelo ngaphambi kokuhambisa kubathengi.Ngale njongo, sihlala sijonga umgangatho wobuso phantsi kwamaxesha e-100 esikhulisi kunye neemfuno zokuhlola ezizodwa ezinje ngemilo ye-boram kunye ne-WFD nazo zamkelwe ngokwemiyalelo.
Ukutshatisa usetyenziso olwahlukileyo, njengamandla aphezulu, iikristali ezinokuthi zonakaliswe ngexesha lomngcelele, sikwanikezela ngeenkonzo zokuhlaziya ezifanelekileyo kubathengi.
Ukuba awuqinisekanga ukuba uyila njani inkqubo yakho okanye zeziphi izinto ezinokusetyenziswa kwesi sicelo, ungakhathazeki, sineenjineli ezinokuthi zibonelele ngokubonisana neengcali zasimahla. Zive ukhululekile ukubuza.
I-DIEN TECH ibonelela ngeekristal ezingama-1-2um, ezinje nge, Nd: YAG 、 Nd ， Ce: YAG 、 Yb: YAG 、 Nd ： YAP 、 Nd ： YVO4. 2 ~ 3um laser crystals, ezinje nge: Ho: YAG 、 Ho: YAP 、 CTH: YAG 、 Er: YAG 、 Er: YSGG 、 Cr ， Er: YSGG 、 Fe: ZnSe 、 Cr ： ZnSe. Amaza amade eekristalu zeNLO, ezinje nge: ZGP, AGS, AGSE, AGISE, CdSe. Kwakhona ezinye izinto ezisekwe kwikristale nakwizixhobo.
Ukukwazi kwethu kubandakanya ukwenziwa kwezinto ezibonakalayo, inkqubo, ukutyabeka, ukulungisa kwaye siyakwazi ukunceda abathengi ngeseti epheleleyo yesisombululo senkqubo ye-laser kunye nokubonisana ngobugcisa. Ukuba uneemfuno, siyakuvuyela ukunceda.